KUSHUBILE: UHunt ushaye ngezinqamulelayo ngokubhacaza kweChiefs - Impempe
KUSHUBILE: UHunt ushaye ngezinqamulelayo ngokubhacaza kweChiefs
May 27, 2021 Impempe.com
Akandanga ngamazwi kodwa uvele washayabngezinqamulelayo umqeqeshi weKaizer Chiefs, uGavin Hunt ngemuva kokuhlulwa yiBlack Leopards emdalwleni weDStv Premiership ngoLwesithathu ntambama.
IChiefs ibhacaze kade seyihamba phambili, yayekela iLeopards yabuya yaze yagcina iwunqoba lo mdlalo obuseThohoyandou Stadium. Ukuhlulwa kweChiefs kuyisondeze kakhulu emaqenjini asezindaweni zezembe, kwawaqhelisa kulawo akwiTop 8.
“Siwuqale kahle umdlalo,” kusho uHunt. Sibe nethuba lokuthi sinyuse amagoli ethu abe mabili (kodwa asangalisebenzisa). Kuthe kusuka lapho bathola igoli sekusele kancane kuyiwe ekhefini.
“Kumele sivale kangcono emuva, besingawenzi kahle lowo msebenzi kulo mdlalo. Siwatholile namanye amathuba esiwombeni sesibili okubalwa kuwo noqekelele la umuntu ebesebhekene ngqo nonozinti. Kodwa ke kuvele kwayibo abashaya elesibili,” kuchaza yena.
Uthe yize isimo sobukeka sibatshekele. Kodwa bazoqhubeka babheke phambili, bazame futhi kule midlalo emibili esele. Amakhosi asendaweni ka-11, inamaphuzu angu-30 ngemuva kwemidlalo engu-28.
Uma ifuna ukungena kwiTop 8, kuzomele iwine noma kanjalo kule midlalo esele. IChiefs izodlala neGolden Arrows ngoJuni 2, bese ivala isizini neTS Galaxy ngoJuni 6.
“Kumele siqhubeke silwe. Sisalele imidlalo emibili manje,” kusho uHunt. Le ndawo ekuyo iChiefs kunzima ukuyamukela kwabanye babalandeli kanti yingakho bekholwa wukuthi uHunt kumele adedelwe uma kuphela isizini.
Previous Previous post: HALALA!: Seyimuke naso isicoco iSundowns ebukise ngeSuperSport kowomkhaya
Next Next post: UYANCONCOZA: UNcikazi uthi kusho lukhulu kuye ukuqokwa kweyePSL